Curacao inozivisa new Managing Director / CEO we Tourism Development Foundation
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Curacao inozivisa new Managing Director / CEO we Tourism Development Foundation
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Curacao Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Iyo Curacao Tourism Development Foundation (CTDF) yakazivisa kudomwa kwaPaul Pennicook saManaging Director / CEO, achishanda nekukasira.
Akapedza kudzidza paCornel University, aine degree muHotel Management uye achinyatsogona Chirungu neSpanish, Pennicook anounza hupfumi hwechiitiko muindasitiri yekugamuchira vaenzi aine zvigaro zvepamusoro munzvimbo dzeruzhinji uye dzakazvimirira muNorth America, Europe neCaribbean.
Jamaican nekuzvarwa, Pennicook ane mukurumbira wakasarudzika wekuti akashanda kaviri saMutungamiriri weVakashanya muJamaica uye nekuve iye ega munhu akashanda munzvimbo dzevatariri vakuru neanoshamisira nzvimbo dzeJamaica - SuperClub dzaisanganisira Breezes, Hedonism II uye Grand Lido mu yavo portfolio, pamwe nenzvimbo dzinozivikanwa pasandals Resorts seMuteedzeri Mutevedzeri weMutungamiriri wedanho rekushambadzira reSandals, Zororo Rakasiyana. Pennicook akashandawo seMutungamiriri / CEO weVakaroora Resorts uye anga ari Mutevedzeri Wemutungamiriri weAir Jamaica, ndege yendege yeJamaica ine mutoro wekushambadzira nekutakura zviitiko.
Pasi pekutanga kwaPennicook saMutungamiriri weHurumende yeJamaica, akatarisa chiitiko chakabudirira chekugadzirisa chakakonzera kushambadzira kwepasirese kwakanangana neBhodi Yezvekushanya uye anorumbidzwa nekushandisa nzira dzakakonzera kuwanda kwevashanyi panguva mbiri dzaakashanda.
Muchidimbu chipfupi, Pennicook akatenda kuvimba kwaakaitwa neCuracao Tourist Board maari nekugadzwa saManaging Director, “ndinoremekedza nhoroondo yezana remakore reCuracao Association yekusimudzira Kushanya Kunze kwenyika uye ini ' ndinoziva nezve nhanho dzakaitwa mumakore achangopfuura kuwedzera vashanyi vanosvika kuCuracao nevehuruzhinji nevemakambani. Ichave rombo rangu kushanda nevashandi vemaindasitiri kuti ndirambe ndichivakira pane izvi kubudirira ”akadaro.
“Zvinonakidza kuve muchikwata chine simba ichi chekushanya uye ndiri kuronga kusangana nevandinoshanda navo kuCuracao Tourist Board (CTB), kuCuracao Hospitality and Tourism Association (CHATA), Curacao Ports Authority (CPA), Airport Chiremera nevamwe vatungamiriri vevashanyi chikamu, kuti vanzwe pfungwa dzavo pamamiriro eindasitiri yeCuracao yekushanya uye nekugovana maonero angu. Mukubatana tichazoona kuti zvakanaka sei kuwedzera vanosvika nevashandisi mari ”Pennicook akaenderera mberi.
“Ndoziva kubva pane zvakaitika kwandiri kuti nyika dzese dzinovimba nekushanya dzine zvipingaidzo zvakasiyana. MuCuracao semuenzaniso, maitiro ayo mamiriro ezvinhu muVenezuela kune vashanyi vanosvika ane chekuita. Imwe pfungwa ndeyekuti CTB ikurumidze kubatika mumisika yedu yepakutanga tichitsvaga mikana mumisika nyowani ichangoburwa yekupokana nekushomeka kwevasvika kubva kuVenezuela. Chinangwa changu ndechekuona kuti Curacao yakamisikidzwa zvine simba kuti iwedzere pamikana yekukura. Kufungisisa kwakapinda mukugadzira brand nyowani yeCuracao yepasirese, Inzwa Izvo Zvako 'zvinoita kuti basa rangu rireruke uye ndinofara kuve chikamu chekuburitswa uye kwatiri kurova pasi "akadaro.
Vakaroora uye baba vemwanakomana, Pennicook ndiye anogashira iyo Order of Distinction (OD) kubva kuJamaican Hurumende yemupiro wakazvipira uye wakazvipira kuChikamu cheKushanya.